Uqasha njani igqwetha eIndiya-NJ kunye ne-NY yeNdawo yokuThengisa, ukuKhangela, ukuKhuselwa kwembonakalo kunye namagqwetha asebambiseni
ikhaya / Blog / Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York / Uqasha njani igqwetha eIndiya
Ndineofisi yomthetho eneeofisi eHackensack, eJersey City, eFreehold, eNew Jersey naseNew York, kubandakanya iManhattan naseBrooklyn. Kutshanje sandise indawo yethu yomthetho ukuya eIndiya.
Le vidiyo imalunga nendlela onokuthi ubabandakanyeke ngayo abameli eIndiya. Ngoku, kutheni umntu angafuna ukuqesha igqwetha eIndiya? Ndakhe ndawubuza lo mbuzo izihlandlo ezininzi.
Abantu bebesoloko besithi kum, “Veer. Uphambene. Kutheni usiya eIndiya? Kutheni ngoku? Qhubeka nje nokukhula kwakho eNew Jersey eNew York. EUnited States. ”
Well Ukuba ngummeli. Ndaye ndabona ukuba uninzi lwabantu lufuna umsebenzi owenziwe eIndiya. Nokuba yinto ejongene nezenzo zokwahlula, ukuthenga izindlu, okanye ukujongana nokudibanisa kunye nokufumana.
Elona candelo liqinisekileyo kukuba ubabamba njani abameli bakho? Umzekelo, masithi awuthethi inyani malunga nesiGujarati okanye isiTamil okanye isiHindi okanye isiUrdu. Kwaye, ngequbuliso kufuneka ujongane nemicimbi esekhaya.
Uhlangabezana njani nemicimbi e-India xa uku-United States? Ujongana njani nemicimbi ebuyela eIndiya ngaphandle kokumelwa ngokufanelekileyo kwezomthetho?
Ngumbuzo obaluleke ngokwenene lowo. Ukuzama ukufumana indlela yokujongana neengxaki eIndiya yinto endifuna ukuyisombulula kubantu abanemicimbi, kodwa andazi ukuba ungabanjani na.
Yingxaki endifuna ukuyisombulula kubantu abangaziyo ukuba bayisingathe njani imicimbi yabo ekhaya eIndiya. Ke ngoku wenzantoni? Ewe, le ndiyithengisayo ndenza iofisi apho ungangena khona kwiofisi yeJersey City kwaye ungaqesha igqwetha / igqwetha eIndiya.
Inqaku elipheleleyo kukuba ungangena kwiOfisi yeGqwetha laseMelika ukuze ubandakanyeke eIndiya. Kwaye ezi ziGqwetha zaseIndiya zinokusingathwa ngabameli bakho eUnited States.
Umzekelo, masithi utat'omkhulu usweleke kwaye washiya ishishini elithengisa izinto kunye nezi zinto kwaye eli shishini lixabisa imali eninzi. Kukho umyolelo kwaye usasaza kubantwana abaninzi. Kusenokwenzeka ukuba abanye baba bantwana bafile okanye bayagula. Ufuna ukwazi ukuba kwenzeka ntoni kwii-asethi kwenzeka ntoni kwimali xa ungekho ngokwasemzimbeni e-India ukuphatha le micimbi?
Yintoni onokuyenza kukuzisa amaphepha eofisi yaseMelika. Singafumana abaGwebi baseIndiya elophondweni. Besinokutshintsha amaxwebhu sibuyele ngapha nangapha Ke igqwetha lamaIndiya liyazi ukuba lithetha ngantoni na ityala lakho kwaye uzokufaka iinkonzo zethu e-US ukuphatha iziphumo ozifunayo e-India.
Into ebaluleke kakhulu kukuba uyazi, kwenzeka ntoni eIndiya. Kwaye uyazi apho umangalelo umi khona. Uyayazi indawo yentengiselwano yendawo yokuhlala. Ngokubandakanya nje inkampani yethu ubandakanyeka kuthungelwano lwamagqwetha kunye namagqwetha ukuze asebenze egameni lakho.
Inqaku elipheleleyo lelokuba ufuna ukuba lula? Ukwafuna ukuthembeka kwaye ufuna ukunyaniseka. Zonke ezi zizinto ozifunayo kwaye ulindele kwigqwetha lakho. Ukuqhubana nabameli ngamanye amaxesha kuyakoyikisa.
Ukwazi into oyifunayo sisitshixo sokuqesha igqwetha. Ufuna ukuba uqiniseke ukuba unokuthetha nabo, unxibelelane nabo, kwaye uqonde apho bakhoyo kwinkqubo yetyala lakho. Yiloo nto esiyenzayo apha Patel Soltis & Cardenas.
Sizama ukwenza ukuba kube lula kuwe ukujongana negqwetha lakho. Kwaye, ukuze siqiniseke ukuba abathengi bethu banelisekile. Silapha ukuqinisekisa ukuba kulula ukujongana negqwetha lakho. Ukuze zikwenze uhlale uhlaziyiwe kwaye ukuze wena ukwazi ukunxibelelana ngokulula negqwetha lakho. Yiyo le nto ukwanda kwenziwa eIndiya kwenziwa: Ukunceda abathengi ngale ndlela ikhethekileyo.
Ukuba uyithandile le vidiyo okanye ufuna ukuva okungakumbi malunga neenkonzo zethu khumbula ukubetha iqhosha elifanayo kwaye ubhalise? Enkosi
Kuyamangalisa ukuba bangaphi abantu endibuza ukuba bafumana njani amaGqwetha amaNdiya kunye namaGqwetha aseCaucasus asebenza kunye. Oku kuqhele ukuya kwingcambu yokuba umntu afune ukufumana igqwetha e-United States esebenzisana namaGqwetha aseIndiya yonke imihla. Nje ukuba zisebenzise iiseti ezimbini zegqwetha ekusebenzeni kunye nezinye zigcina iiyure ezingamakhulu ngonyaka ngokungaphindanga ziphindaphinde ivili ngalo lonke ixesha kuqalwa umlinganiso omtsha.
Sifuna ukuba yindawo yakho yokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho zomthetho eIndiya.